Think Different | Myanmar Gazette News Media Forum Network - Page 4
Think Different	18
မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XVI
ဘုန်းကြီးအတုမဟုတ်သော လူအတုနှင့် ကြုံရစဉ်
~~~ ပိုက်ဆံချမ်းသာမှ ခရီးသွားနိုင်တာ မဟုတ်ပါ ~~~~
” ရှူခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်း “
Page4of 184«<...23456...102030...>»
Comments By Postချစ်ခြင်းမေတ္တာတရား - ၀င့်ပြုံးမြင့် - Thint Aye Yeikဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေမယ့် ၂၁ရာစု၏တိုးတက်လာသော အသုံးဝင်နည်းပညာများ - သျှားသက်မာန် - Thint Aye YeikPromotion လေးတွေလာပါပြီ............................... - Thint Aye Yeikလေကြောင်းခရီးသွားသည့်အခါ တစ်ကိုယ်ရေးသုံး Liquid-Gel-Spray ပစ္စည်းတွေကို ဘယ်လိုသယ်ဆောင်သွားမလဲ ? ? ? - Thint Aye Yeikအေးခဲနေသောအနောက်နိုင်ငံကနိုင်ငံများ........... - Thint Aye Yeikပြည်ပခရီးသွားများ၏မျက်စိကျ လည်ပတ်ဖွယ်ဖြစ်လာသည့် မြန်မာ - Thint Aye Yeikအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံလေး...လာအိုသို့ - Thint Aye Yeikသူမတူတဲ့ မိန်းမသားများအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ရန်အတွက် - Thint Aye Yeik - သျှားသက်မာန်ခရီးသွားတဲ့အခါ ကိုယ့်ပစ္စည်းတွေကို လျင်မြန်လွယ်ကူစွာ ထုတ်ပိုးနိုင်ဖို့ သိထားရမယ့် အချက် (၁၅) ချက် - Thint Aye Yeik - သျှားသက်မာန်ဇလုံတောင်ဘုရား မရောက်ဖူးသေး သူများနှင့် ဘုရားသမိုင်း - Thint Aye Yeik - သျှားသက်မာန်ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး ၈ ဦး - Thint Aye Yeik - kaiကျွန်တော်နဲ့ Dead Body (0:1) - Thint Aye Yeik - manawphyulayချိုသာခွန်းဆက်, နှုတ်ဆက်ကြလျှင် - manawphyulay - aye.kkယာဉ်အို စက်ဟောင်း ထိန်းမောင်းနေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် - kai - manawphyulayဘီယာသောက်တဲ့ ပုဇွန် - manawphyulay - အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက်"ေ ကာက်ရိုးမီး" - Thint Aye Yeik​မွေး​နေ့ဆိုတာ - manawphyulay - Thint Aye Yeikကျိုက်ထီးရိုးဘုရားကိုနေ့ ချင်းပြန်စရိတ်ငြိမ်းနဲ့ သွားကြမယ် - etone - သျှားသက်မာန်အဝင်ကော - ko six - Thint Aye YeikMarijuana - ဆေးခြောက် - Thint Aye Yeik - kaiအရောင်ရင့်မှတ်တမ်း - ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၇ - kai - kaiကဗျာဆန်ဆန်လှချင်တိုင်းလှနေတဲ့...ကဗျာဝကမ်းခြေ (or) အပျိုစင်ကမ်းခြေ - သျှားသက်မာန် - Thint Aye Yeik''ဤ''ကို ခပ်လွယ်လွယ်--ကျွဲချင်သူတွေ များလွန်းတော့လည်း... - Thint Aye Yeik - Thint Aye Yeik၀မ်း ဗိုက် ပြားချက်နေဖို့ မနက်ခင်း တိုင်းစားပေးသင့်တဲ့ အရာ - သျှားသက်မာန် - Thint Aye Yeikထူးမြတ်သောသွေးလှူခြင်း - aye.kk - etoneမြသပိတ်ရေပြာအိုင် - သျှားသက်မာန် - Ma Eiဖွင့်မရတဲ့ ဦးနှောက် - ဂျစ်စူ - Thint Aye Yeik" အငုံ့စိတ် " - ဂျစ်စူ - Thint Aye Yeikအယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း - ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၇ - အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် - ဂျစ်စူကဗျာလေး မူးနေပြီ - aye.kk - အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက်နာဂတောင်တန်းတွေဆီက ပျံ့လွင့်လာတဲ့တေးသွားများနဲ့နှစ်ကူးပွဲတော် - သျှားသက်မာန် - အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက်စာပေတိုက်ပွဲခေါ်သံ(၂)-NEO-CLASSICISM တွေ ထွက်ခဲ့ဟေ့ - Thint Aye Yeik - ဂျစ်စူချစ်ခြင်းပုံပြင် နိဒါန်း - sorrow - CrystallineThe Sense of Traveling - sorrow - sorrowဖွဲတစ်ဆုပ်... - sorrow - ဦးကျောက်ခဲခရီးသွားခြင်းကသင်ပေးသည့်အရာများ ******************************************* - သျှားသက်မာန် - Thint Aye Yeik"ပြည့် " - aye.kkစာပေတိုက်ပွဲခေါ်သံ(၁)- မျှစ်ကြော်ရဲ့လက်သီးချက်ကို မြည်းစမ်းခြင်း - Thint Aye Yeik - ဇီဇီအလင်းဆက် ကျိုက်ထီးရိုးသွားတုန်းက.... - Thint Aye Yeik - အလင်းဆက်ကျိုက်ထီးရိုး ကေဘယ်ကား - သျှားသက်မာန် - Darli May AyeCategory	Arts & Humanities